Yemen: Bala, Hiakan-taraina ary Anjomara (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2011 13:13 GMT
Tatitra vao tonga avy any Sanaa renivohitr'i Yemen no milaza fa raha kely indrindra dia mpianatra iray avy amin'ny anjerimanontolo no maty ary marobe no naratra tamin'ny fifandonana tamin'ny hery manohana ny governemanta halina .
Ireo vavolombelona no miteny fa ireo ‘jiolahim-boto’ mpomba ny governemanta no nanafika ny mpianatra taminà antsy sy vato. Ireo mpampita vaovao ao an-toerana dia mitatitra fa avy eny amin'ireo trano avo ireto mpanafika ireto no nitiftra basy an'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana, izay nitorevaka teo akaikin'ny Anjerimanontolon'i Saana hatramin'ny Alahady 20 Febroary. Ireo mpianatry ny anjerimanontolo sy tanora maro hafa no nitarika ny fihetsiketsehana efa ho roa herinandro izao ho fanoherana ny teo-draharaha ara-politika sy ara-toekarena atrehin'ny firenena.
Ankehitriny dia mitàna ny laharana faha 133 amin'ny firenena 169 ao anatin'ny fandaharana nataon'ny Programam-pampandrosoana ny maha-olona, sampana iray ao amin'ny Firenena Mikambana i Yemen , eo anelanelan'i Myannar sy Benin. Raha araka ny filazan'ny Transparency International, Yemen dia mifamatotra amin'i Libya, faharoa avy any amin'ny faran'ilay lisitra amin'ny fomba fitsaran'ny olona ny haavon'ny kolikoly any amin'ireo firenena ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra.
Araka izay ametrahan'ny olona iray mpitondra fanamarihana azy, Ibrahim Sharqieh avy amin'ny Brookings Center ao Doha, :
“Ny tahan'ny tsy fananana asa sy ireo tondro ara-toekarena hafa dia manambara fa manakaiky ny teboka tsy azo ialàna i Yemen.”
Eo anivon'ny hatezeran'ny sasany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny governemantan'ny Filoha Ali Abdullah Saleh, izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1978. Tsy ela akory izay dia nanamafy i Saleh fa tsy handao na hiala mihitsy mandra-pahatongan'ny fifidianana izay hatao amin'ny 2013.
Ny herisetra nitranga ny alin'ny Talata dia nitranga indrindra tamin'ny fiafaran'ny andro iray izay nahitàna mpanao fihetsiketsehana anarivony naneho hevitra nanerana ny tanànan'i Aden sy Sanaa, izay naharatràna mpanao fihetsiketsehana miisa dimy.
Anaty lahatsary mitsitapatapaka tsindraindray, ampakarin'i EBNSHAMS, ireo mpianatra manao fihetsiketsehana dia aseho miaraka amina fahafihana an'ireo “bullies – andian'olona maherisetra mampijaly ny osa”. Heno mazava tsara ny poa-basy.
Ireto ny fitaterana ny vaovao tao amin'ny Twitter:
@carlconradi: Fa inona no tena dikan'ny fananganana tranolay ataon'ireo mpomba ny governemanta eo akaikin'ny Anjerimanontolpo? Misy vaovao? #Yemen #Sanaa
@Yemen_2011: #Sanaa mandrakitr an-tsary ireo tranolay natsangan'ny mpomba ny governemanta eo akaikin'ireo mpianatry ny Anjer.& qabilis nanandrana nandroaka ireo mpomba ny gov & nanomboka ny tifitra – mbola an-dalam-panamarinana izy ity #Yemen
@ReemQatar:Vao izao mihitsy : roa no maty marobe no naratra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta ao #Yemen. #MiddleEast #Libya
@Yemen_2011: VAOVAO MAIKA: Tafakatra ampolony izao ny isan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo noratrain'ireo (jiolahim-boto) mpanohana ny governemanta , iray no atahorana no tena voa mafy #yf
@tomfinn__: notafihan'olona mitondra poleta, antsy ary basilava ireo mpianatra; maherin'ny 20 no naratra #Sanaa #Yemen #yf
@Yemen_2011: oayy… vao avy nahazo vaovao indrindra izao avy amin'ny namana – Hashid nankeny amin'ireo mpianatra tamin'ny 5 ora hariva – tafiditra tao anatin'ny tifitra naharitra 30 mn tao amin'ny Anjerimanontolo, naka sary an'ireo mpomba ny governemanta
@tomfinn__: Amafisiko fa olona 2 no maty (matin'ny tifitra) ary raha kely indrindra dia 20 no olona naratra tao amin'ny anjerimanontolon'i #Sanaa #yf ny fiara mpitondra marary fahadimy izao iny vao hitako lasa iny
@tomfinn__: niresaka taminà dokotera 2 hafa tao amin'ny anjerimanontolon'i #Sanaa: mpianatra 1 matin'ny tifitra teo noho eo ary iray hafa miady mafy amin'ny fahafatesana ao amin'ny hopitaly, voatifitra tamin'ny lohany. #yf”
< ahref=”http://twitter.com/#!/ArabsUnite/status/40149183197487104″>@Yemen_2011: Ny laharam-pamantarana ireo fiara roa nentin'ireo jiolahim-boto nanafika ny mpanao fihetsiketsehana tao #sanaa: mazda (2/6462) ary ilay faharoa mercedes (1/4121) #yf #sanaa
@shephardm: Ny fahafatesana voalohany tao Sanaa. Miteny ireo vavolombelona nanatri-maso fa mpianatra roa nanao fihetsiketsehana no namoy aina ary marobe no naratra tamin'ny fifandonana tamin'ny hery mpanohana an'i Saleh iny alina iny. #yemen
@JebBoone: Vao avy any amin'ny anjerimanontolon'i #Sana'a. Taorian'ny fifanakalozana tora-bato dia nitifitra ireo mpifanandrina aminy ireo mpomba an'i Saleh. 1 maty, 1 miady amin'ny fahafatesana, 20 naratra.#Yemen #YF
@gregorydjohnsen: @prince640 Heveriko fa tsy rariny ny hanjeràna ny tsiny amin'ireo antokon'olona ireo – eny, nitombo ny mpiasa an-tselika, saingy ny tatitra dia manambara fa jiolahim-boto ireny fa tsy ireo andiana mpiasa an-tselika
@Yemen_2011: Fa inona no miketrika ao anatin'ny lohan'itony mpanao jadona itony e?! Na iza na iza manan-tsaina dia hahatakatra ny hoe raha ianao ihany no hamono ny vahoakanao dia vao mainka izy ireo hankahala anao bebe kokoa #yf